Anyanwụ Panel nwụnye DIY Tutorial! - Kimroy Bailey Group
Vidiyo a bụ nke mbụ n’usoro anyị na nkuzi DIY na-akụzi na ntinye nke klọọkụ anwụ n’elu ụlọ dị larịị. A haziri nkuzi a ka ndị nrụnye ume ọhụrụ na ndị nwe ụlọ nwere mmasị ịwụnye obere usoro nke ha. Ọ na - egosikwa otu anyị si eji ụgbọ elu nke aluminom, jikọọ wires, igbe igwe, na ịgbanye waya eletriki maka onye na - ahụ maka ụgwọ, inverter, na batrị. Nke a bụ ụlọ GRID gbanyụrụ site na 1 ikuku ikuku na 8 ogwe anyanwụ. JPS (icalọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọha na Jamaica) akwadobeghị ụlọ a. Anyị ewepụwo ya kpamkpam na okporo mmiri. Ya mere ulo a na aru oru zuru oke. Ya mere, o nwere ogwe 8 nke anyanwụ na 1. Nke a bụkwa onye ahịa na-enwe obi ụtọ.
Ihe ndị achọrọ maka nrụnye mbara igwe
Ogwe 8 nke anyanwụ mere na 250W
2 Aluminium rails 14ft ogologo
8 Nkwụsị mkpọchi na 12 Mid-Clamps
Otu igbe mpịakọta 6
4 DC onye na-emebi emebi 15Amp ma ọ bụ 20Amp
50ft AWG 6 Red na Black Solar waya
Uminlọ Aluminium maka nrụnye nke mbara igwe
Gbanye ogwe ahụ ruo n’ụgbọ okporo ígwè alumịnụ maka ntanetị nke nrụnye anyanwụ
Nke mbụ, anyị na-ebunye mbara igwe nke dị n'elu ụlọ ma kwadebe maka nrụnye nke mbara igwe anyị. Anyị na-eji bọọdụ adịgboroja echekwa mkpọchi aluminom maka ogwe ikuku nke ụlọ ahụ dị na mbara igwe.
Ulo bụ otu n’ime ndị na - eme ihe ochie n’ụwa bolts nke eji rụọ ụlọ, mmezi ụlọ ọrụ, na imezigharị ụlọ. Ulo arịlịka bolts A na-ejikarị iji wụnye ihe owuwu na brik, blọk, na okwute.
Maka ntinye nke ikuku a anyị jiri nkuku M6 mee ya mere anyị nwere oghere 8mm ma ọ kwesịrị ịdị omimi 35mm. Ogologo ogologo nke ụzọ aluminium nke ọ bụla dị ogologo iri na anọ ka ogologo nwere ike ijide ogwe ọkụ 2. Anyi na edobe ogwe n’usoro nke anọ. Mgbe ị na - akụ ụkwụ, ọ kacha mma ịwụnye arịlịka ụkwụ ihe dịka ụkwụ asaa site na ibe ha. Anyị na-eji ihe akpọrọ T-Clamps ma ọ bụ Mid-Clams dịka ị na-ahụ ebe a. A na-eji ihe ndị a eme ihe iji chebe ogwe anyanwụ ma a ga-etinye L-clamps na njedebe nke otu ọ bụla. Anyị ga n’ihu ma anyị na-ejide mbara igwe nke anwụ, n’ụzọ nkịtị. Anyị ebubata ya n’ọdụ ụgbọ okporo ígwè.
Gbaa mbọ hụ na waya eletrik na-eche ihu n’elu. Maka na nke a kacha nso n’igbe ọkpọ anyị. Lee, anyị na-emechi mkpọchi T-clam ma ọ bụ nke etiti. Ihe ndị a dị n'ezie n'etiti ogwe anyanwụ abụọ ma ị na-eme ka ndị ahụ dị n'elu na nke ọzọ dị na ala. Ọ bụrụ n’ilele anya na vidiyo a ị ga - ahụ ebe T-Clamp na - ejikọ ọnụ abụọ dị na mbara igwe. Na njedebe, anyị na-eji njedebe L-Clamps. Anyị na-eji njedebe L-Clamps na njedebe nke ahịrị. Ya mere, ị ga - achọ mgbachi 4 ọ bụla nke ogwe anyanwụ ma nwee abụọ na njedebe ọ bụla. Lee, anyị na-emechi oghere ndị Mid-Clamps ụfọdụ karịa na nrụnye nke mbara igwe anyị.
Njikọ eletriki maka nrụnye panel
Na ijikọ wires eletriki maka nrụnye nke igwe anyị
Dọkasi n'okpuru ogwe ọkụ gị ma jikọọ eriri eletrik gị ọnụ, nke ahụ bụ akụkụ siri ike. Ma nke a mara mma ihu. Mgbe ị na-ejikọ ogwe ọkụ anyanwụ gị n'usoro ị jikọtara ihe na-adịghị mma nke otu mbara igwe na ọdịmma nke ndị ọzọ. Anyị na-edebe ogwe abụọ n'usoro. Maka ntinye nke panel asatọ anyị, anyị nwere ìgwè anọ nke ogwe abụọ. Onye ọ bụla jikọtara na 8AMP na-emebi emebi na igbe njikọta anyị.
Lee, anyị na-atọgbọ nke abụọ. Anyị na-ahụ na ahịrị ahụ kwesịrị ịdị nke ọma, anyị na-ejikwa mbọ ike na-adịghị atụpụrụ ndò dị n'ihu ahịrị n'ihu na mbara ihu igwe n'ahịrị nke azụ. Nke a dị mkpa n'ihi na ndò ga-emebi ihe arụmọrụ nke nrụnye nke anyanwụ gị. Bore turula ọtụtụ oghere ndị ọzọ site na iji bitmill 8mm gị. Nke kachasị nke na-agba mbọ hụ na oghere ahụ dị omimi nke 35mm iji mee ka nkịta dị mma nke Raul dabara.
Echichi igbe igwe
Ọrụ nke igbe igwe ga - eme ka arụpụta nke ọtụtụ eriri anyanwụ jikọọ ọnụ. Ha na - enyekwa aka mee ka ikike na - abata bata n'otu isi nri na - ebunye na windo maka ọkụ ma ọ bụ onye njikwa maka sistemụ ikuku. A na-ejikọta ogwe anyanwụ. Ya mere, ejikọtara njiri mara mma nke ọ bụla di na 15Amp breaker. Ọzọkwa, a na-ejikọta ihe adịghị mma nke ụzọ ọ bụla na ụlọ ọrụ na-adịghị mma.
N’ikpeazụ, a na-ejikọkwa mgbakwunye site na ntinye nke ogwe anyanwụ na igbe igwe. Nke a na - echedo ogwe anyanwụ ma ọ bụrụ na ọkụ ọgbụgba amụọ. N’ihi nke a, a na-ejikọ wires 3 dị na igbe igwe jikọtara ọnụ. Imirikiti ọ na - enyere aka ịhazi wires. Mgbe wires na-abata na ogwe, a na-ejikọ ha na eriri abụọ maka onye na-ahụ maka ụgwọ.
Nyochaa nke nrụnye nke mbara igwe 8 anyị
Lee, anyị na-eji akara etiti abalị nke igbe igwekota. N'ebe a, anyị na-etinye ahịrị nke abụọ nke ogwe anyanwụ. A na-ejikọkwa ogwe ndị a na abuọ. Ejikọtara ha na adịghị mma na ihe ziri ezi wee ziga ya na onye njikwa ahụ. Ma ugbu a, ọ bụ oge maka sistemụ anyanwụ anyị ikpeazụ. Ee, ị nwere ya. Ogwe ahụ na-agbadata. Ugbu a, anyị ga-agafe wires anyị ma jikọọ ha niile na igbe njikọta anyị.
Ọkachamara teknụzụ anyị bụ Ordain Brown na-emecha njikọta nke igbe n'ime igbe njikọ. Emere nke a site na itinye oghere ma jikọta ụkwụ dị mma site na ogwe gaa na onye na-emebi emebi. Ndị na-adịghị mma na ogwe osisi na-anọpụ iche na ala.
Site na igbe Combiner ka ọ gbaa ụgwọ njikwa
Iji igodo Allen iji chekwaa ntinye nke igwe
Ugbu a ọ bụ oge iji welie eriri eletriki gị na igbe igwe na-ejikọta ya na n'ime njikọ njikọta eletriki elekere ebe ị ga-enwe njikwa ụgwọ, inverter, na batrị. Nke a mara ezigbo mma ị ga - emerịrị ka ị hụ na wires gị nke ọma. AWG 6 kwesịrị zuru ezu. Anyị ji eriri abụọ arụkọ ọrụ karịa nke mere anyị ji nwee ike ịza ya n’elu mana anyị ka na-eji ikuku eletrik arụ ọrụ. Nke a na - a thatụmarị na anyanwụ anaghị emecha mkpuchi mkpuchi ahụ.
Ma anyị nwekwara igbe eserese nke ga-enyere anyị aka ịkwatu site n'elu ụlọ ruo ala igbe igbe eletriki anyị. Anyị ga-esi na igbe elekere eletrik a zipụ wires n'ime ụlọ ahụ. Maka njikwa chaja, onye na-abanye n'ime ya na batrị. Ọ dị mkpa na ị ga - enwe isi ihe. Ọ bụrụ na enwere ihe kpatara ị ga-enye nsogbu n’ọdịnihu ị ga - enwe ike ịnweta wires ndị ahụ.
TeamKB, daalụ m nke ukwuu maka ikiri vidiyo maka nkuzi a na agụ ederede. Nọgide na-ekiri vidiyo na-esote n'usoro ga-egosi gị otu esi ejikọ igwe ojii na onye njikwa ụgwọ. Biko amasị LATII ederede a ma soro ndị enyi gị kesaa ya na Facebook. Nwere onwe gị ịza ajụjụ ma jụọ ajụjụ banyere sistemụ a.
Denye aha na Oasis Videos site na Trott Bailey Family maka ihe nkuzi ume ohuru vidiyo!
Daalụ TeamKB, Ka anyị #KeepBelieving.
Onye hiwere Kimroy Bailey Foundation, KB Robotics na KB Renewables. Kimroy bụ otu n'ime ndị uche na-ahụ maka injinia na mpaghara ahụ ma Prime Minista, Gọvanọ General na IEEE, ụlọ ọrụ ọkachamara kachasị ama ama maka ụwa maka injinịa ya. Kimroy Bailey Robotics na-agba izu ugbu a na CXC iji tinye Robotik na Renewable Energy na Schoolslọ Akwụkwọ Highga n'ofe Caribbean.
TOSIN OLOFIN zaghachi
Ezigbo mgbede KB, aha m bụ Tosin si Nigeria, amụrụ m ike a na-emezigharị, m sitere na Nigeria. a masiri m nke oma n’onu oma unu umu nwoke n’eme na jamaica, amam ihe banyere utan ma achoro imuta ntuzo nke anwu n’igwe na ikuku n’amaghi ama ma oburu na ha bu ozuzu ha n’otu ebe a na enye ọzụzụ. ọ ga-amasị m isonye. olile anya ịnụ azụ. daalụ.
November 24, 2017 na 10: 00 am
Kimroy Bailey zaghachi
Ndewo Tosin, Nigeria mara mma nke ukwuu na anyị hụrụ ya n'anya ebe ahụ. Nzọụkwụ Site na Nzọụkwụ Solar N'ezie lekwasịrị anya na ịwụnye sistemu nke anyanwụ na ụlọ gị ebe Nzọụkwụ site na Nzọụkwụ Ifufe Ifufe Turbine Course ga-akụziri gị otu esi ejikọ eriri ikuku na ntinye anyanwụ.
May 29, 2020 na 8: 39 pm
Ego ole ka ọ na-efu na ogwe anyanwụ?
Ego ole ka enwere ụgwọ ọrụ?
Onwere ego nkwụghachi ma ọ bụ ego enyere ego zụrụ gọọmentị ma ọ bụ ụlọ ọrụ ịba uru?
Can nwere ike pụọ na nsogbu enweghị nsogbu ọ bụrụ na ị ga - enweta ego maka iziga ike na oghere ma ọ bụrụ na itinyerị?
November 28, 2017 na 4: 08 pm
Charles Brown zaghachi
ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị ịmara banyere usoro nrụnye nke panel panel. jiri obiọma mee ka anyị mara ọnụ ahịa iji nweta ihe niile maka nrụnye ma ọ dị ụzọ ọ bụla ka ìhè anyanwụ wee daa na panel ahụ iji mee ume. Nzọụkwụ Nzọụkwụ Solar n'ịntanetị bụ n'ezie ọzụzụ kachasị mma n'ịntanetị.
Kimroy Bailey mmeghari ohuru Robotics Summer Camp Flyer 2016 Kimroy Bailey Robotics na Mahadum Teknụzụ, Jamaica esorola na ... GỤKWUO
02Ka Nwere ike 2, 2013
Wigton rụrụ ọrụ $ 1 Ijeri net
Wigton Wind Farm Jamaica Ltd, ugbo ikuku kachasị na Bekee na-asụ Caribbean nwere amụma $ 1 ijeri na ... GỤKWUO
Ngosiputa BaiboBotics nchekwa ulo na KB Renewable Robotics Laboratory "Ogige kacha mma!" Jevaugh Bruce tiri mkpu mgbe ọ dị afọ iri na ụma, mgbe ọ… GỤKWUO